Mapurisa Anochengetedza Gweta Rinorwira Kodzero dzeVanhu
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, VaAlec Muchadehama, vatorwa nemapurisa apo vasvika kumatare edzimhosva mangwanani eChina, Zvinonzi VaMuchadehama vanga vaenda kumatare edzimhosva kunomirira nyaya dzevanhu vavanomirira dzange dziri mudare ramejasitiriti.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti VaMuchadehama vaendwa navo kukamba huru yemapurisa iri muHarare yeHarare Central. Zvinonzi mapurisa ange achironga kuvaendesa kukamba yemapurisa yekuMatapi kuMbare kuti vanorara ikoko vakachengetedzwa nemapurisa.
Mutauriri wemapurisa, VaWayne Bvudzijena, varamba kujekesera kuStudio7 kuti VaMuchadehama vatorerweyi nemapurisa. VaBvudzijena vaudza vatori venhau kuti vasiye mapurisa achishanda panyaya iyi.
Gweta riri kumirira VaMuchadehama, VaHarrison Nkomo, vanoti VaMuchadehama havasati vapomerwa mhosva yavatorerwa nemapurisa.
Asi vari kuziva zviri kuitika kumapurisa vanoti VaMuchadema vangangopomerwa mhosva yekuvhiringidza mafambiro edzimhosva nemitemo zvichitevera kuburitswa mutirongo kwakaitwa vanhu vatatu vaimirirwa naVaMuchadehama. Zvinonzi hurumende iri kuti vasungwa ava vakaburitswa muhusungwa mushure mekunge vabhadharirwa mari dzechibatiso negwara risiri kwaro.